Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndi otu ochichi njem nleta nke Eswatini na ndi otu njem njem nlere anya nke Africa
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • News • Mgbasa Ozi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Alaeze Eswatini, nke a na-akpọbu Swaziland sonyeere ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa dị ka ndị kachasị ọhụrụ.
Onye isi oche nke Minista nke njem na gburugburu ebe obibi bụ Moses Vilakati ga-aga ma kwuo okwu na ulo oru mwepụta n'ihi na Ndị njem nlegharị anya nke Africa na Ahia ahia ahia nke Afrika na Cape Town, South Africa na Eprel 11.
Linda L. Nxumalo, onye isi ndị isi nke Eswatini Tourism Authority ga-abịa.
Dịka otu n'ime alaeze ole na ole fọdụrụ n'Africa, ọdịbendị, na ihe nketa gbanyere mkpọrọgwụ n'akụkụ niile? Nke ndụ Swazi, na-eme ka ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu nye ndị niile bịara leta ya.
Nakwa dị ka ọdịbendị bara ọgaranya, na oke enyi nke ndị mmadụ na-eme ka ndị ọbịa niile nwee mmetụta nke nnabata na ezigbo nchekwa.
Tinye na nke a odida obodo nke ugwu na ndagwurugwu, oke ohia na mbara ala; gbakwunyere anụ ọhịa na-echekwa gafee mba ndá »‹ na-obibi Nnukwu ise,? na ndị ọbịa nwere ihe niile kachasị mma gbasara Africa n'otu mba pere mpe nke ọma ma nabata.
Eswatini bu Afrika n’okwu di nkenke. O nwere ike ịbụ ihe nzuzu mana ọ nweghị ụzọ ka mma iji kọwaa Eswatini (Swaziland). Obere mba a - otu n'ime alaeze ikpeazụ nke Africa - nwere akụ na ụba pụrụ iche. Nature hụrụ nwere ike soro ala rhinos n'ime ọhịa lowveld ma ọ bụ chọọ obere nnụnụ na jupụtara na nkume highveld. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nwere ike ịga na nke ochie a ma ama ma ọ bụ soro ụzọ ndị ọchịchị si amalite. Na udele ndị omenala nwere ike ịmasị Umhlanga na ememme ndị ọzọ, dịka Eswatini na-eme ọdịnala oge ochie ya n'ụzọ dị egwu. Omume sitere na ịnya anyịnya na ịsọ mmiri na golf na spas na-ekpo ọkụ na-enye obi ụtọ na izu ike n'otu oge. Kedu ihe ọzọ, Eswatini nwere mmekọrịta enyi na enyi, nchekwa ma dịkwa oke nkenke na ọ nweghị ebe karịrị awa abụọ 'isi site na isi obodo. Ya mere, ihe ị na-eche? Mba Afrika kachasi zuo oke na-enye gi nnabata Swazi.
Eswatini, nke a makwaara dị ka Swaziland, nwere mpaghara nhazi 4 mana maka ebumnuche nke njem bụ nke dabara n'ụzọ dabara adaba na mpaghara 5, nke ọ bụla na-enye ọtụtụ ebe nkiri na ahụmịhe dịgasị iche. Inweta isi ihe nke compass maka aha ha, nke ọ bụla n'ime mpaghara ndị a na-eme njem nlegharị anya nwekwara ike ịkọwapụta site na ebe nkiri na ahụmịhe dị n'ime - bụrụ ebe ahụ dị ịtụnanya, ahụmịhe ọdịbendị bara ụba ma ọ bụ nzukọ anụ ọhịa na-atọ ụtọ. Ebe ichebara otu mpaghara anya ga-enye onye ọbịa ohere ịhụ ụdị onye ọ bụ, ihe ọ theụ nke Eswatini bụ na oke ya nyere ohere ka 'mejupụta ma dakọ' na mpaghara ọ bụla, ọbụlagodi n'otu ụbọchị!
Enweghị nnukwu nzuzo ọ bụla n'okporo ụzọ Eswatini dị ukwuu - iji hụ ụdị dịgasị iche iche nke mba ahụ, gaa ọtụtụ mpaghara dị ka o kwere mee (opekata mpe 3)! Mana n'enweghi mmasị ọ bụla karịa awa 2 site na nke ọ bụla, ọ dị mfe ileta ha niile n'usoro ọ bụla ma mepụta njem ịkwa akwa na nke gị chọrọ na-ezughị ogologo njem ọ bụla.
Central Eswatini: Omenala Heartland
Agbanyeghi obere mpaghara njem, Central Eswatini bụ ebe isi obodo obodo ahụ, obodo nke abụọ kachasị ukwuu, ebe ndị njem na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị. Obodo abụọ a, Mbabane na Manzini, dị naanị kilomita iri abụọ na ise ma nọrọ n’etiti ha bụ ndagwurugwu Ezulwini nke ghọrọ ebe njem nlegharị anya nke Eswatini, na ala ọdịnala Royal nke Lobamba nke bụkwa ụlọ nzuko omeiwu. Ebe enwere oke ohia nke mba kachasi di mfe na Mlilwane na Mantenga Nature Reserve ya na nsụda mmiri ya mara mma na obodo ọdịnala nke etinyere maka nke ọma, nke a bụ mpaghara nke ọgaranya bara ụba na nnukwu ebe nlegharị anya maka onye ọbịa ọ bụla. Ọnọdụ etiti a na-enyekwa ohere ịnweta mpaghara ndị ọzọ niile.
North West Eswatini: Ọdịda Highland
Mpaghara North West nke Eswatini dị na nnukwu ugwu ma bụrụ ebe na-akpali akpali ikuku ikuku na mbara igwe. Ugwu akwara na ndagwurugwu dị egwu na-etolite ebe ọwụwa anyanwụ nke ndagwurugwu South Africa nke Drakensberg ma okpueze site na elu abụọ kachasị elu nke mba ahụ - Emlembe (1,862m) na Ngwenya (1,829m). Mpaghara mara mma nke ukwuu, ndị ọbịa nwere ọtụtụ ihe ha ga - eme, gụnyere ịgagharị ihe okike nke Malolotja na Phophonyane (n'ụkwụ, ịnyịnya, igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọbụlagodi n'okporo ụzọ dị na zip-wires!), Na-enyocha oge ochie Nsangwini nkume art, enwe Bulembu - na re-mụrụ ghost obodo na a ebube ugwu ọnọdụ na-ewere a ụgbọ mmiri njem na ebube Maguga Dam. Ihe nkiri mpaghara ahụ dabara adaba n'ụzọ ma ọ bụ na-adịghị anya site n'okporo ụzọ MR1, nke na-amalite naanị 15km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Mbabane wee gbasaa ruo ókèala South Africa na Matsamo (30-45mins si Kruger NP). Ọ na-ewe naanị ihe dịka 1 ½ iji chụọ ogologo nke MR1.
North East Eswatini: Nchekwa & Obodo
North East Eswatini dị na ndagwurugwu - nnukwu mbara ala ọhịa - na mgbe ahụ ugwu nke ugwu Lubombo na-agbago ọwụwa anyanwụ iji mepụta ókè ya na Mozambique. Ọ bụ ọtụtụ ala shuga na-achịkwa nke sitere na 1950s na ndị klọb obodo ya nwere ike ịnụ ụtọ ndị ọbịa. Oke ohia ohia (dika Kruger Park di na South Africa) zuru oke ala safari na mpaghara a bu otutu ulo (ha nile enweta site na uzo MR3) nke mejuputara Lubombo Conservancy. Hlane Royal National Park bụ nke kachasị ukwuu na nke bara ọgaranya, yana Mlawaula na Mbuluzi Nature Reserves na-enye nnweta dị mfe na mpaghara ọzara mara mma, nke a na-emetụbeghị. Ugwu bu oke ohia ma maa nma nke nwere ime obodo, otu n’ime ha, Shewula, n’enye ihe nlere anya nke njem nleta nke ndi obodo na inweta ebe ozo ozo.
South East Eswatini: Anụmanụ na-emechi emechi
Mpaghara a dịkarịrị ala na ala ala. Ọ bụ ebe Eswatini bụ isi safari, Mkhaya Game Reserve, nke amaara gburugburu ụwa maka ahụmịhe rhino ya, nke na-ama nke ọ bụla n'Africa. Enwere naanị agbasa agbasasị mana ọtụtụ mmiri mmiri na-agba mmiri site na nnukwu osimiri mba ahụ, bụ Usuthu, ebe mmiri mmiri na-acha ọcha dị. Nisela, na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ na-enyekwu ahụmịhe safari.
South West Eswatini: ịma mma mara mma
Ọtụtụ South West Eswatini dị na nnukwu ugwu - ọmarịcha mma nke ugwu ugwu nke mepụtara nnukwu ndagwurugwu na ọnụ ọnụ ugwu. N'amaghi anya, enwere nnukwu njem na ebe a na-enye njem nlegharị anya - Mahamba Gorge na ọmarịcha Ngwempisi. Nkonyeni Golf Estate na-enye ọtụtụ ọrụ na mpaghara nke ịma mma mara mma ka ị na-abanye na Grand Valley na-aga n'ebe ndịda site na etiti Eswatini. Ọ bụkwa mpaghara nwere ụfọdụ ebe na-adọrọ mmasị nke akụkọ ihe mere eme - ụka mbụ nke mba ahụ (nke a ka nwere ike ịga na Mahamba), na isi obodo emume mbụ nke Nhlangano.
Omenala ọdịnala Eswatini na-atọ ndị ọbịa ọbịa. Arịrịọ a gosipụtara n'onwe ya: obere Alaeze a jisiri ike idowe ọdịnala ndị dị tupu oge ọchịchị yana na n'agbanyeghị nsogbu niile nke oge a, bụrụ ihe dị mkpa na ndụ ọdịnala ya. N’obi ya, ọbụbụeze, nke na-ejikọ mba ahụ ọnụ n’ememe na n’ememe. N'ezie, alaeze ahụ abụghị ebe ngosi nka dị ndụ, mana ihe ị ga - ahụ - ụcha, ejiji na ibe akwụkwọ - bụ ezigbo ahịa, ọ bụghị ụfọdụ mkpa maka ụlọ ọrụ ndị njem. Ememe ndị a dị ka Umhlanga, ma ọ bụ Reed Dance, so na ụdị ndị kachasị ama ama na kọntinent ahụ. Lezie anya na-acha uhie uhie nke ligwalagwala, ma ọ bụ odo odo-turaco, nke na-egosi ọnọdụ nke onye nwe ya.
Ala dịgasị iche iche na ebe obibi dị iche iche nke Eswatini na-enye ya ọtụtụ anụmanụ na ahịhịa, na ọtụtụ ụdị ụdị dị iche iche site n'ọtụtụ ụkpụrụ European. Obodo a ezughi oke iji nye ọtụtụ ahụmịhe egwuregwu, mana o nwere ụfọdụ mpaghara echedoro 17 nke bụ ebe obibi maka ọtụtụ ụdị, gụnyere 'Big 5' na-achọ. Nakwa dị ka otu n'ime ebe kachasị mma na kọntinent ahụ iji hụ rhinos (n'ụkwụ yana site na 4 × 4 wee hụ rhinos ojii na nke ọcha), Eswatini bụkwa ebe zuru oke iji nọrọ ọtụtụ obere ihe okike na-ejidekarị eleghara anya safari n'ebe ọzọ, ọ bụkwa paradaịs nke na-ele nnụnụ.
Eswatini bu obere ala nwere oke ugwu. Site na akwara ugwu nke ọdịda anyanwụ nke ugwu ọdịda anyanwụ ruo n'ọhịa anụ ọhịa nke ọwụwa anyanwụ Lubombos, enweghị ụzọ gbagọrọ agbagọ n'okporo ụzọ na-adịghị enye ọhụụ ọzọ dị egwu. Na nnukwu okwute ndị a kpụrụ akpụ, obodo mara mma na osimiri ndị meandering mejupụtara iji mejupụta onye nlere ahụ, na-emebi foto maka nhọrọ. Ìhè na-agbanwe mgbe niile, karịchaa n'oge udu mmiri, mgbe égbè eluigwe dị elu na-abata n'igwe ojii na-eyi egwu, mgbe mmiri ozuzo zosịrị, hapụ igwe na-acha anụnụ anụnụ na-enweghị atụ. Onye ọ bụla bịara abịa nke Alaeze ahụ nwere ike ime ihe ọjọọ karịa ịwagharị n'ugwu na ndagwurugwu ma nwee ọ theụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile banyere ọdịdị mara mma na ezigbo ala ịkpa.
Eswatini bu, obi abụọ adịghị ya, ebe ndịda Africa na-ekpo ọkụ! Okirikiri ala ya dịgasị iche na-enye ohere zuru oke maka ịhọrọ ọtụtụ ihe omume. Mmiri na-acha ọcha n'ụtụtụ n'ụtụtụ na Osisi-Canopy Tour n'ehihie - ikekwe ọbụna na mgbede egwuregwu mgbede! Abseiling, rafting, caving, rịa, na ọbụna quad biking bụ ihe niile a na-enye na mba a na-agba ọsọ ọsọ adrenaline.
Enwere otutu nke emebere nke oma ndị njem na ndị ọrụ na Eswatini onye nwere ike inyere gị aka ịhazi ihe omume gị.
Omenala ọdịnala Eswatini hụrụ ngosipụta kachasị dị egwu n'ọtụtụ emume a na-eme kemgbe afọ a na-eduzi n'ọtụtụ oke. Ndị a bụ ihe omume ọdịnala dị ndụ nke na-egbochi ugogbe anya maka anwụ na ekwentị mkpanaaka, agbanwebeghị na narị afọ abụọ. N’achọpụghị, ọgbọ nke ugbu a emeela ọhụụ ọhụụ ọhụụ, egwu na nka nke mebere ọmarịcha aha mba ụwa. Site n’ọsọ egwuregwu igwe kwụ otu ebe na egwuregwu ndị ọzọ na-eme kwa afọ, kalenda Eswatini bụ nke bara ọgaranya ma na-akwụghachi ụgwọ.
Egwuregwu ndị dị ka skwọsh, tenis, igwu mmiri dị na họtel na ebe obibi nakwa otu ọgbakọ mba na Sugar Estates. Royal Swazi Spa dị na ndagwurugwu Ezulwini na Nkonyeni nke dị na ndịda bụ ebe a na-akụzi golf kacha mma na mba ahụ, yana ọmụmụ asọmpi asọmpi iri na asatọ na ọmarịcha ihe nkiri maka gooflị ka ha na-aga. Azu di kwa na otutu mmiri na osimiri gbara gburugburu obodo a, nwere azu, azu na otutu umu ala.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Eswatini ndị na-enye ohere afọ ofufo, ma ha na-arụ ọrụ na anụ ọhịa na nchekwa, ọrụ afọ ofufo mmadụ, ma ọ bụ ndị ọrụ afọ ofufo egwuregwu. Enwere ọtụtụ mmemme ị nwere ike ịbanye iji hapụ akara dị mma na Eswatini.
EGO NTOLR V AKW .KWỌ
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ banyere Eswatini Tourism na www.thekingdomofeswatini.com/
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara Board of Tourism Board na mmemme mmemme ya na www.africantourismboard.com